Indlela yokulungisa iTirethi yeTyithuthuthu
Ukuba uhamba ngesithuthuthu kwaye uyakrokraza ukuba unesondo esicatyebileyo, ixesha liyinto engundoqo: okokuqala kuqala kukuqinisekisa ukuba unokukhupha ngokukhuselekileyo kwaye uphume ekuphumeni kweendlela.
Ukusetyenziswa kweebheki kungabangela ukulahleka kolawulo, ngokucwangcisa kakuhle ibhayisikili yakho ngokubamba iqhosha kwiiphatha, ngaphandle kokulwa nebhayisikili kakhulu. Gwema ukuhla kwehla okanye ukuqhuma ufike kwixesha elide, kwaye ukuba unesiqiniseko uyazi ukuba yeyiphi ivili elingahlanjululwayo, sebenzisa iibhuleki kwenye ivili ngokulula nangokuthe ngcembe. ISiseko sezokuThuthukiswa kweThuthiloli sikhumbuza ukuba ezinye izithuthuthu zidibanise iibhuleki, ngoko gcina loo nto ingqondweni xa kwaye kwaye usebenzisa izicelo zokuvala xa usenalo isondo esicacileyo njengoko ungenakunqwenela ukufaka uxinzelelo lwe-freake kumavili.
Amathayi amathambo angabangelwa ngamanani amaninzi, kubandakanywa nemozulu emanzi (ebangela izinto ezibukhali, okwenza kube lula ukungena kwi-rubber), kunye namathayi aphezulu aphezulu (awona maninzi kwaye athambekele ekuthatheni izinto zangaphandle.) Hlalani khumbula ukuba iiflethi ezininzi zibangelwa ukukhwela ngexinzelelo lomthamo ophantsi.
Sebenzisa i-Kit yokulungisa
(Ifoto esuka ku-Amazon)
Enye indlela yokujongana nomtya wesithuthuthu esiphezulu-ngokukodwa xa unqatshelwe-kukuzilungisa. Iikiti zokulungisa iTire zilula ukuyisebenzisa, kwaye zipakisha kalula phantsi kwesihlalo sakho okanye ngaphakathi kwinqwelo yakho. Ngelixa amanye amathaya awonakaliswe akwazi ukulungiswa, kulungele ukuzama ukucima ifayili yakho xa ukhetho lwakho luphantsi kwaye awukho ndawo kufuphi nesikhululo senkonzo. Qaphela ukuba ukugqithwa kusondele kakhulu kumgama wecala, iplagi ayisoloko isisombululo esiphepheyo sokulungiswa kwiplati.
Ukunyamezela Umoya Ocinezelekileyo
Umoya ocinezelekileyo awuyi kusombulula ingxaki yesithintelo esicwebileyo kodwa ngokuqinisekileyo uyakusindisa loo mini ukuba ufumane ukuvuza okucothayo okanye ufuna ukugcwalisa itayili emva kokuba ulungise i-flat. Thatha ibhotile encinci yomoya ogxininisiweyo, kwaye akuyi kudingeka ukuba uthembele kwizikhululo zesevisi ukuya phezulu kwivili ukuze ugcine uxinzelelo olufanelekileyo.
Ngaba Kukulungele ukusebenzisa iSlime?
I-Tire ishime (ebizwa nangokuthi "goop") yinto ebonakalayo ebonakalayo ehlanjululwayo ngaphakathi kwipaneti ephangaleleyo kwaye isebenza njengophawu. Isisombululo esiphezulu sisithintelo - abanye bayifungela, kwaye abanye bayakhawuleza baveze izingozi zayo - kodwa ekubeni asizange sizihlolisise thina ngokwethu, asiyi kucebisa okanye siyikhuphe ukusetyenziswa kwayo. Nangona kunjalo, kuyafaneleka ukuba sicinge ukuba inyaniso ukuba ukuba ungekho kude kuncediso, mhlawumbi unomdla wokujonga oku njengesisombululo esifutshane esiza kukunceda ukhuseleko, ubuncinci.
Ukucinga Ngaphambili Kwixesha Elizayo
(Alan W Cole / Getty Izithombe)
Nangona ngamanye amaxesha akukho ndlela yokukhusela isicatyambo, kukho iindlela ezifanelekileyo zokuzilungiselela xa ufumana kwisimo esichengileyo. Kubaqalayo, qiniseka ukuba uhlola rhoqo amanqanaba okunyathela kwamanqanaba akho , kuba ugibele kwixinzelelo oluphantsi ungakhokelela ekugqibeleni kwindondo yokugqithisa kwaye ekugqibeleni uphethile.
Uya kufuna kwakhona ukulungiselela ukungazalanga ngokupakisha ikiti yokulungisa umtya kwiipakethi zakho eziphuthumayo, kwaye zibandakanya amathole omoya oxinyiweyo kunye / okanye umtya, ukuba igumbi livumelekile.
24 Iindawo zokuthenga iMithetho yeencwadi
Ukungcola komngqamlezo: Ukukhula kweengxaki zamazwe ngamazwe
Iincwadi Eziphezulu Ngeendlela
Yintoni i-Capitalism, ngokuchanekileyo?
Izibambiso zesiLwimi zesiJamani - isisindo (ukutya) - Ixesha elidlulileyo
Uluphi ulwimi 'lwamaYuda' lwesiSpanish?
I-Saint Vincent College Admissions
I-Saola: I-Unicorn yase-Asia eyingozi
Yintoni i-NSA I-PRISM ye-PRrm ime?